(UPDATE) I-CDC ikhiphe umyalezo ophuthumayo wanoma imuphi umMelika ogonywe nge-Pfizer
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » I-USA Izindaba Ezintsha » (UPDATE) I-CDC ikhiphe umyalezo ophuthumayo wanoma imuphi umMelika ogonywe nge-Pfizer
Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Health News • Izindaba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • I-USA Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezihlukahlukene
UMongameli wase-United States uBiden kanye nochwepheshe bezokwelapha e-United States babe nezimemezelo ezihlukile maqondana nesibhamu sesithathu se-COVID-19 esithuthukisiwe Namuhla Isikhungo Sokulawulwa Nokuvimbela Izifo e-United States sikhiphe isincomo esiqondile mayelana ne-booster shot namuhla, okungenani i-Pfizer umuthi wokugoma.
QAPHELA: Isibuyekezo seBooster Shot kuModerna noJohnson Johnson sishicilelwe namuhla.
Chofoza lapha ukufunda.
Namuhla, uMqondisi we-CDC uRochelle P. Walensky, MD, MPH, ugunyaze isincomo se-CDC Advisory Committee on Immunization Practices '(ACIP) ngesincomo somuthi wokugoma we-Pfizer-BioNTech COVID-19 kubantu abathile futhi wancoma nomthamo wokukhuthaza labo ezindaweni ezinobungozi obukhulu emsebenzini nasezikhungweni.
Ukugunyazwa kwe-Food and Drug Administration (FDA) kanye nesiqondiso se-CDC sokusetshenziswa yizinyathelo ezibalulekile phambili njengoba sisebenza ukuhlala phambili kwaleli gciwane futhi sigcina abaseMelika bephephile.
Lesi siqondisi sesikhashana esibuyekeziwe esivela ku-CDC sivumela izigidi zabantu baseMelika abasengozini enkulu yokuthi i-COVID-19 ithole isibhamu esithuthukisayo sePfizer-BioNTech COVID-19 ukusiza ukukhulisa ukuvikelwa kwabo.
abantu abaneminyaka engama-65 nangaphezulu kanye nabahlali ezindaweni zokunakekelwa zesikhathi eside kufanele thola isikhuthazi somuthi wokugoma we-Pfizer-BioNTech we-COVID-19 okungenani izinyanga eziyisithupha ngemuva kochungechunge lwabo oluyinhloko lwe-Pfizer-BioNTech,
abantu abaneminyaka engama-50-64 nge ngaphansi kwezimo zokwelashwa kufanele thola isikhuthazi somuthi wokugoma we-Pfizer-BioNTech we-COVID-19 ku okungenani izinyanga eziyisithupha ngemuva kochungechunge lwabo oluyinhloko lwePfizer-BioNTech,
abantu abaneminyaka engama-18-49 nge ngaphansi kwezimo zokwelashwa may bathola isikhuthazi somuthi wokugoma we-Pfizer-BioNTech we-COVID-19 okungenani ezinyangeni eziyisithupha ngemuva kochungechunge lwabo oluyinhloko lwe-Pfizer-BioNTech, ngokuya ngezinzuzo zabo nobungozi babo, futhi
abantu abaneminyaka engu-18-64 abasengozini enkulu yokuchayeka nokudluliswa kwe-COVID-19 ngenxa yesimo somsebenzi noma sesikhungo maybathola isikhuthazi somuthi wokugoma we-Pfizer-BioNTech we-COVID-19 okungenani ezinyangeni eziyisithupha ngemuva kochungechunge lwabo oluyinhloko lwe-Pfizer-BioNTech, ngokuya ngezinzuzo zabo nobungozi babo.
Abantu abaningi asebenelungelo lokuthola i-booster shot bathola umuthi wokugoma wokuqala ekuqaleni kohlelo lokugoma futhi bazohlomula ngokuvikelwa okwengeziwe. Ngokubusa kokwehlukile kweDelta njengokucindezela kokujikeleza namacala e-COVID-19 akhula kakhulu kulo lonke elase-United States, i-booster shot izosiza ukuqinisa ukuvikelwa ezifweni ezinzima kulabo bantu abasengozini enkulu yokuvezwa yi-COVID-19 noma izinkinga ezifweni ezinzima.
I-CDC izoqhubeka nokuqapha ukuphepha nokusebenza kwemithi yokugoma i-COVID-19 ukuqinisekisa izincomo ezifanele zokugcina bonke abantu baseMelika bephephile. Sizophinda futhi sihlolisise ngemininingwane etholakalayo yokuphuthuma emavikini azayo ukuze sisheshe senze izincomo ezengeziwe zabanye abantu noma abantu abathole imigomo kaModerna noma kaJohnson & Johnson.
UDkt Walensky Wathi:
Njengomqondisi we-CDC, kungumsebenzi wami ukubona lapho izenzo zethu zingaba nomthelela omkhulu khona. E-CDC, sinikezwe umsebenzi wokuhlaziya idatha eyinkimbinkimbi, evame ukungaphelele ukwenza izincomo zikakhonkolo ezithuthukisa impilo. Kubhubhane, noma kunokungaqiniseki, kufanele sithathe izinyathelo esicabanga ukuthi zizosiza kakhulu.
Ngikholwa ukuthi singazisiza kangcono izidingo zezempilo zomphakathi ngokuhlinzeka ngemithamo yokulekelela asebekhulile, labo abasezikhungweni zokunakekelwa zesikhathi eside, abantu abanezimo ezingaphansi kwezempilo, kanye nabantu abadala abasengozini enkulu yezifo kusuka ekuvezweni emsebenzini nasezikhungweni kuya ku-COVID-19 . Lokhu kuhambisana nokugunyazwa kwe-booster ye-FDA futhi kwenza la maqembu afanelekele ukudutshulwa nge-booster. Namuhla, i-ACIP ibukeze kuphela idatha yomuthi wokugoma wePfizer-BioNTech. Sizobheka, ngomuzwa ofanayo wokuphuthuma, izincomo zemithi yokugoma iModerna ne-J & J ngokushesha nje lapho leyo mininingwane itholakala.
Ngenkathi isenzo sanamuhla bekuyisinyathelo sokuqala esihlobene nokuqhuma kwe-booster, ngeke siphazamise ekugxileni kwethu okubaluleke kakhulu kokugoma okuyinhloko e-United States nasemhlabeni jikelele. Ngifuna ukubonga i-ACIP ngengxoxo yabo ecatshangelwe kahle kanye nokucubungula kwesayensi ngemininingwane yamanje eyazisa izincomo zami.
UTeresa Crawford uthi:
Septemba 25, 2021 ku-17: 53
SMH… Ngithatha isikhathi ukuphendula ngale mali yokugibela !!! Ngicabanga ukuthi umuthi wokugoma awuzange uzuze inani lokugcina lokufa njengoba bekuhleliwe…
Ngakho-ke, izintatheli mbumbulu kumele zisunduze lokhu kulandisa okuyisiphukuphuku kokuthola i-booster! Kuyadabukisa ngempela ukubona abantu abaningi bekhohliswa ukukholelwa la manga!
Septemba 25, 2021 ku-14: 26
Yebo kulungile. Ngicishe ngikukholwe.
UKathy Ward uthi:
Septemba 25, 2021 ku-10: 20
Ungayithola yini i-Pfizer booster uma uthola umuthi wokugoma we-moderna